Dhaqaalaha Archives - Page 2 of 2 - Ceelhuur Online
Home > Dhaqaalaha > Page 2
May 7, 2018 admin916
Shirkadda baabuurta Sameysa ee Toyota ayaa 27 sano ka dib waxa ay Soomaaliya ka furtay xafiis ay leedahay, shirkaadaan oo ah tan loogu isticmaal badan yahay gaadiidkeeda gudaha dalka Soomaaliya. Toyota Soomaaliya ayaa waxa ay soo maraysaa Shirkadda SKA. Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo xariga ka jaray ayaa sheegay in ay […]
April 9, 2018 admin569
Waxaan Halkaan idinkugu soo gudbinaynaa qeybta 1-aad Muuqaalo taxane ah oo ka hadlaya Saameynta ay ku yeelatay Diidmada Lacagta Shilin Soomaaliga Ganacsiga Magaalada Cadaado. Muuqaalka 1-aad ayaa ka hadli doona Saameynta diidmadu ku yeelatay sariflayaasha Cadaado. halkaan hoose ka daawo. la wadaag saaxiibadaa.
August 6, 2017 August 6, 2017 admin869
Shabakadda Ceelhuur Online [ceelhuur.com] ayaa heshay document muujinaya in Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf u magacaabay mudane Axmed Yuusuf Cabdulle gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Galmudug. Warqadda oo ku taariikheysan 15 Luulyo ayaa cadeynaysa in mudanahaan muddo 6 bilood ah si kumeelgaar ah usii haynayo xilkaan, inta laga qabanaayo doorashada gudoomiyaha rugta […]
August 2, 2017 admin642
MA JIRTO LACAG CUSUB OO LA SOO DAABACAYO. Qof kasta waa jecelyahay in uu ubad dhalo, laakin ma jecla Dhicis aan loo heeyn dhala lagu koriyo, lana hubo in uu saqiirayo marka lagu rafaado kadib. A-Taariikhda Bangiga dhexe. Taariikhda Bangiga dhexe ee somalidu waxa ay ka soo bilaabanee waqtigii maxmiyada UN aan galnay, United Nation’s […]
February 12, 2017 admin611
Gudoomiyaha Bankiga Dhexe Bashiir Ciise Cali ayaa Sheegay in Sanadkan ay Soo Daabici Doonaan Lacago Cusub oo Shilin Somali ah Waxaana ku Baxaya 60 Milyan. Lacagta ayaa qorshaha laga leeyahay ah sidii ay uxoojin leheyd Awooda Lacagta Shilinka Soomaaliga oo hada Suuqyada qaar Gabaabsi ka ah Waxa ay Daba Socotaa Hoos udhaca Mudooyinkan ku Yimid […]